२०७७ माघ ०३ शनिबार
पोजेटिभ रिपोर्टको दर ७.८६ प्रतिशत
आश्विन १७, २०७७ ०९:५८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । कोरोना भाइसर राेग (कोभिड–१९) पत्ता लगाउनका लागि गरिने आरटी पीसीआर परीक्षण नेपाल १० ला ४८ हजा ६८६ भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको शुक्रबारसम्म आँकडा अनुसार सो संख्यामा परीक्षण भएको हो। यसमा पोजेटिभ नतिजा देखिनेको संख्या ८२, ४५० रहेको छ । परीक्षणमा पोजेटिभ रिपोर्टको दर ७.८६ प्रतिशत छ ।
गत जनवरीमा कोभिड–१९ को पहिलो शंकास्पद बिरामी देखा पर्दा नेपालमा परीक्षणको व्यवस्था नभएर हङकङस्थित कोकिड ल्याबमा स्वाब पठाइएको थियो । अहिले नेपालमै दैनिक २२ हजार भन्दा धेरै पीसीआर परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दावी गरिरहेको छ । बिहीबारदेखि शुक्रबारसम्म २४ घण्टामा १४ हजार भन्दा धेरै परीक्षण गरियो ।
पछिल्ला दिन देशमा ५६ वटा प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ । यसमध्ये ४० सरकारी र १६ निजी प्रयोगशाला रहेका छन्। सरकारी प्रयोगशालाले ९ लाख २२ हजार २८८ परीक्षण गरेको छ। निजी प्रयोगशालाले १ लाख २६ हजार ३९८ परीक्षण गरेका छन्।
सबैभन्दा धेरै पीसीआर परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गरेको छ । यसले १ लाख ९० हजार ८१ परीक्षण गरेको छ । सबै भन्दा थोरै परीक्षण गर्नेमा त्रिवि वायोमेट्रिक कोरोना प्रयोगशाला, कीर्तिपुर रहेको छ । यसले हालसम्म जम्मा ४५३ परीक्षण गरेको छ । यसपछि कम परीक्षण गर्नेमा ललितपुरको लेलेस्थित कोभिड–१९ डायनोस्टिक प्रयोगशाला छ । यसले ४८८ परीक्षण गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यका बाहिर कम पीसीआर परीक्षण गर्नेमा बैतडी अस्पतालको प्रयोगशाला रहेको छ । यसले हालसम्म जम्मा ६२२ परीक्षण गरेको छ ।
निजी प्रयोगशालामा सबैभन्दा धेरै परीक्षण स्टार अस्पतालको प्रयोगशालाले गरेको छ । यसले २९ हजार ४२९ परीक्षण गरेको छ । यो निजी प्रयोगशाला मध्ये सबैभन्दा पहिलो पीसीआर परीक्षणको अनुमति पाउने प्रयोगशाला मध्येको एक हो ।
यससँगै परीक्षण अनुमति पाएको काठमाडौ मेडिकल कलेज सिनामंगलले १२ हजार ३२८ परीक्षण गरेको छ । निजी प्रयोगशालामा सबैभन्दा कम परीक्षण गर्ने नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको प्रयोगशाला रहेको छ।
जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले कूल परीक्षणको १८.१२ प्रतिशत गरेको छ । त्यसैगरी निजीतर्फ धेरै परीक्षण गर्ने स्टार अस्पतालले २.७६ प्रतिशत परीक्षण गरेको छ । निजी प्रयोगशाला मध्ये स्टारले मात्रै २३.२८ प्रतिशत परीक्षण गरेको छ।
गर्भवतीलाई कति फुड सप्लीमेन्ट आवश्यक ?
पौष ०१, २०७७
कोरोना खोपको प्रभावकारिता रगत परीक्षणबाट पत्ता लाग्छ ?
कुकुर पाल्ने व्यक्ति बढी स्वस्थ, यी हुन् कारण
२४ घण्टामा ५ जना संक्रमितको मृत्यु, संख्या १९४८
नेपालमा भारतको कोरोना खोप 'कोभिसिल्ड' लाई आपत्कालिन प्रयोगको अनुमति
काठमाडौं उपत्यकामा १७२ सहित थप २७० जनालाई काेराेना पुष्टि
२०२१ मा कोरोना महामारीले अझ खराब अवस्था निम्त्याउने चिनियाँ विज्ञको चेतावनी